Ahoana ny fomba fampiasana ny fitsangatsanganana an-tany ho an'ny mpanjifa mba hanatsara ny ezaka amin'ny ezaka ara-barotra amin'ny fangatahana
Alatsinainy, Aogositra 2, 2021 Alatsinainy, Aogositra 2, 2021 Arun Sivashankaran
Mba hanatsarana tsara ny ezaka ara-barotra amin'ny fitakiana dia ilaina ny fahitana amin'ny dingana rehetra amin'ny dian'ny mpanjifanao sy ny fitaovana hanarahana sy handinihana ny angon-drakitra mba hahafantarany izay manosika azy ireo ankehitriny sy amin'ny ho avy. Ahoana no anaovanao an'izany? Soa ihany, ny fitsangatsanganana momba ny dia nataon'ny mpanjifa dia manome fomba fijery sarobidy momba ny fomba fitondran-tenan'ireo mpitsidika sy ny safidiny mandritra ny dian'ny mpanjifa iray manontolo. Ireo fahitana ireo dia ahafahanao mamorona traikefa ananan'ny mpanjifa nohatsaraina izay mandrisika ny mpitsidika hanatratra
UserTesting: Fizarana momba ny olombelona ilaina amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa
Ny varotra maoderina dia ny mpanjifa ihany. Raha te hahomby amin'ny tsenan'ny mpanjifa, ny orinasa dia tokony hifantoka amin'ny traikefa; tsy maintsy miombom-pihetseham-po amin'izy ireo izy ireo ary mihaino ny hevitry ny mpanjifa mba hanatsarana hatrany ny traikefa noforoniny sy ateriny. Ny orinasan-tserasera izay mandray ny fahitan'olombelona ary mahazo valinteny kalitao avy amin'ny mpanjifany (fa tsy ny angona fanadihadiana fotsiny) dia afaka mifandray akaiky kokoa amin'ireo mpividy sy mpanjifany amin'ny fomba misy heviny kokoa. Manangona olombelona
Maninona ny mivantana amin'ny marika ho an'ny mpanjifa no manomboka manangana magazay biriky sy molotra
Talata, Novambra 20, 2018 Talata, Novambra 20, 2018 Jessica Bruce
Ny fomba tsara indrindra hanomezan'ny marika marika fifampiraharahana manintona ny mpanjifa dia ny fanapahana ny mpanelanelana. Ny kely dia ny go-betweens, ny kely kokoa dia ny vidin'ny mividy ho an'ny mpanjifa. Tsy misy vahaolana tsara kokoa hanaovana an'io toy izay mifandray amin'ny mpividy amin'ny alàlan'ny Internet. Miaraka amin'ireo mpampiasa smartphone 2.53 miliara sy solosaina manokana an-tapitrisany, ary fivarotana eCommerce 12-24 tapitrisa, dia tsy miankina amin'ny fivarotana antsinjarany ara-batana intsony ny mpiantsena. Raha ny marina, ny niomerika
Ny fanadihadiana inMoment dia manambara lakile 6 tsy ampoizina ho an'ny personalization
Alarobia 25 Janoary 2017 Alarobia 25 Janoary 2017 Douglas Karr
Ireo mpivarotra dia mampifandray ireo zavatra niainan'izy ireo manokana tamin'ny dokambarotra nokendrena tsara raha toa kosa ny mpanjifa mampifandray ny traikefan'ny mpanjifany (CX) miaraka amin'ny fanohanana sy ny fividianana. Raha ny marina, ny 45% -n'ny mpanjifa dia manome laharam-pahamehana ny fananana traikefa manokana ho an'ny fifanohanana fanampiana noho ireo izay mifandraika amin'ny fizotran'ny marketing na ny fividianana. Ny elanelana dia fantatra sy voarakitra an-tsoratra ao amin'ny fanadihadiana iraisam-pirenena vaovao avy amin'ny InMoment, The Power of Emotion and Personalization: Ahoana no ahafantaran'ny marika sy hahitana ny andrasan'ny mpanjifa. Isaky ny firenena nanaovana fanadihadiana, marika sy
CX mifanohitra UX: Ny tsy fitovian'ny mpanjifa sy ny mpampiasa
Alatsinainy Martsa 7, 2016 Alatsinainy Janoary 23, 2017 Suzi Shapiro
CX / UX - Taratasy iray ihany no tsy mitovy? Taratasy iray mihoatra ny iray, saingy be dia be ny fitoviana eo amin'ny asan'ny Customer Experience sy ny Experience mpampiasa. Ireo matihanina miaraka amina asa mifantoka dia hianatra momba ny olona amin'ny fanaovana fikarohana! Ny itovizan'ny tanjon'ny mpanjifa sy ny fanandramana ho an'ny mpampiasa dia ny tanjon'ny mpanjifa sy ny fanandramana ho an'ny mpampiasa dia mitovy matetika. Samy manana ny: Ny fahatsapana fa ny orinasa dia tsy amin'ny fivarotana sy fividianana fotsiny, fa amin'ny filàna mahafa-po sy amin'ny fanomezana lanja